के ईश्‍वर हुनुहुन्छ? ईश्‍वरको अस्तित्व छ? | बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरू
लेखको भाषा hindi (roman) अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अलुर अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इजरायली साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबान इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उड्मुर्त उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एङ्गोलन साङ्केतिक भाषा एफिक एम्बेरा (चामि) एम्बेरा (साटिओ) एस्टोनियन ओक्पे ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काबार्डिन-सर्केस काबुभरदियानु काम्बा कालांगा (बोत्स्वाना) किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (टिना) कुइचुआ (सान्टिआगो डेल एस्टेरो) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्वेचा (हुआल्लागा हुआनुको) क्षोसा खाकस गा गाउरानी गालिसियन गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक ग्वाटेमाला साङ्केतिक भाषा चाङगाना (मोजाम्बिक) चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुभास चेक चेक साङ्केतिक भाषा जमैकन क्रिओल जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टान्ड्रयो टालियन टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डुआला डेनिश ताइवानी साङ्केतिक भाषा ताङ्काराना तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोतोनक त्वी त्सोंगा थाई दक्षिण अफ्रिकी साङ्केतिक भाषा दारी नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) निऊ नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पिजिन (पश्चिम अफिका) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोमेरानियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा फ्राफ्रा बंगाली बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बास्क बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बेल्जियन फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मारी मार्तिनिकन क्रिओल मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिजो मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रियुनियन क्रिओल रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोङ्गा रोमानियन रोमानी (अर्जेन्टिना) रोमानी (भ्लाक्स, रुस) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक रोमानी (सर्बिया) लक्जमबर्गियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुन्डा लुभेल लो जर्मन लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वास्टेक (सान लुइस पोटोसी) वेल्श शुअर शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोमाली सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हन्स्‌रिक हवाईयन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
के ईश्‍वर हुनुहुन्छ?
अडियो अडियो डाउनलोडका विकल्पहरू के ईश्‍वर हुनुहुन्छ?
हुनुहुन्छ। बाइबलले ईश्‍वर साँच्चै हुनुहुन्छ भन्‍ने जोडदार प्रमाणहरू दिन्छ। यसले हामीलाई ईश्‍वरमा अन्धाधुन्ध विश्‍वास गर्न सिकाउँदैन। बरु आफ्नो “सोचविचार गर्ने क्षमता” अनि “आन्तरिक चेतना” चलाएर ईश्‍वरमा विश्‍वास गर्न प्रोत्साहन दिन्छ। (रोमी १२:१; १ युहन्‍ना ५:२०, फुटनोट) तल दिइएका बाइबलआधारित तर्कहरू विचार गर्नुहोस्‌:
व्यवस्थित ब्रह्‍माण्ड अनि यसमा जीवन सम्भव हुनुले सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्‍ने कुराको सङ्‌केत दिन्छ। बाइबल भन्छ: “हो, हरेक घर कसै न कसैद्वारा निर्माण गरिएको हुन्छ तर सबै थोक निर्माण गर्ने त परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ।” (हिब्रू ३:४) यो तर्क सरल भए तापनि थुप्रै विद्वान्‌ले यस तर्कलाई समर्थन गर्छन्‌। *
मानिस भएकोले हामीमा जीवनको उद्देश्‍य के हो भनेर बुझ्ने चाहना छ। हाम्रो सबै भौतिक आवश्‍यकता पूरा भए तापनि त्यो चाहना भने हराउँदैन। यस कुरालाई बाइबलमा हाम्रो “आध्यात्मिक आवश्‍यकता” भनिएको छ, जसमा ईश्‍वरको विषयमा जान्‍ने र उहाँको उपासना गर्ने चाहना समावेश छ। (मत्ति ५:३; प्रकाश ४:११) हामीमा यस्तो आध्यात्मिक आवश्‍यकता हुनुले ईश्‍वर साँच्चै हुनुहुन्छ भन्‍ने कुराको प्रमाण दिन्छ। साथै यसबाट उहाँ हामीले आफ्नो आध्यात्मिक आवश्‍यकता पूरा गरेको चाहने मायालु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर पनि देखिन्छ।—मत्ति ४:४.
बाइबलमा शताब्दियौँअघि गरिएका भविष्यवाणीहरू सही साबित भएका छन्‌। भविष्यवाणी विस्तृत र सही भएकोले त्यो जानकारी ईश्‍वरबाट आएको हो भन्‍ने कुरामा ढुक्क हुन सक्छौँ।—२ पत्रुस १:२१.
बाइबल लेखकहरूसँग भएको वैज्ञानिक ज्ञान त्यतिबेलाका अरू मानिसहरूसँग थिएन। उदाहरणको लागि, पुरातन समयमा थुप्रै मानिस पृथ्वीलाई हात्ती, बँदेल वा साँढेजस्ता जनावरहरूले थामिराखेको छ भनेर विश्‍वास गर्थे। त्यसको ठीक उल्टो बाइबलमा “पृथ्वी कुनै आडविना झुन्डिरहेको छ” भनी बताइएको छ। (अय्युब २६:७) त्यसैगरि बाइबलले पृथ्वीको “घेरा” वा “परिधि”-बारे उल्लेख गरेर यो गोलाकार छ भनी बताउँछ। (यसैया ४०:२२, फुटनोट) बाइबल लेखकहरूले विज्ञानसम्बन्धी त्यस्ता गहिरा कुराहरू बुझ्न सक्नुको कारण तिनीहरूले त्यो जानकारी ईश्‍वरबाट पाएकोले हो भनेर थुप्रै मानिस मानिलिन्छन्‌।
बाइबलले जीवनका थुप्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नहरूको जवाफ दिन्छ, जुन प्रश्‍नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउँदा थुप्रै मानिस नास्तिक बन्छन्‌। उदाहरणको लागि, यदि ईश्‍वर मायालु अनि शक्‍तिशाली हुनुहुन्छ भने संसारमा किन यत्ति विघ्न दुःखकष्ट र दुष्टता छ? धर्महरू किन प्रायः असल कामको लागि नभई खराब कामको लागि जिम्मेवार मानिन्छन्‌?—तितस १:१६.
^ अनु.2उदाहरणको लागि, ब्रह्‍माण्डको विषयमा एक खगोलविद्‌ एलन सान्डेजले यसो भने: “यस्तो व्यवस्थित ब्रह्‍माण्ड संयोगले आएको हो भन्‍ने कुराको कुनै आधार पाइनँ। ब्रह्‍माण्ड व्यवस्थित हुनुको पछाडि केही न केही कारण पक्कै हुनुपर्छ। ईश्‍वरको अस्तित्वमाथि शङ्‌का त लाग्छ तर ब्रह्‍माण्डमा भएका कुराहरूलाई विचार गर्दा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा साँच्चै तर्कसङ्‌गत लाग्छ।”
थुप्रैले अनुत्तरदायी ठान्ने प्रश्वहरूको जवाफ महत्त्वपूर्ण छ र?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने के ईश्‍वर हुनुहुन्छ?
ijwbq लेख ७८
के हामी ईश्‍वरलाई साँच्चै भेट्टाउन सक्छौँ?